Njem gaa Cayman Islands | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Ebe njegharị, Islands
Haswa nwere ọtụtụ agwaetiti mara mma na Oké Osimiri Caribbean ọ ụtụtụ ezigbo paradaịs. Ọmụmaatụ, Ugwu Cayman, ókèala Britain nke dị n'etiti Jamaica na Yucatan Peninsula, ama ama nke ịbụ a ụtụ ụtụ ebe ulo oru na ndi nwere nde ego na-anata ugwo.
Ma agwaetiti Cayman nwere nke ha akụ ndị njem nleta, yabụ taa anyị ga - amata ihe ha bụ, ọdịdị ala ha, omenaala ha ...
1 Ugwu Cayman
2 Njem Nleta nke Cayman Islands
Agwaetiti dị iche iche enwere atọ na ngụkọta ha no na odida anyanwu Oke Osimiri Caribbean, na ndida nke Cuba na northeast nke Honduras. Ọ bụ ihe gbasara Nnukwu Cayman Island, Cayman Brac na Little Cayman. Isi obodo bụ obodo George Town, na Grand Cayman.
Ekwenyere na Christopher Columbus achọpụtala agwaetiti ndị ahụ na 1503 na njem ikpeazụ ya. Columbus mere ha baptism Las Tortugas, maka otutu umu anumanu a, obu ezie na ndi ozo dikwa ya ma ekwukwa na, site na ebe a, aha ha nwere ta. Ndị ọkà mmụta ihe ochie achọtabeghị ihe fọdụrụnụ tupu e biri na Europe, ma enweghị ike iwepụ ya.
Mgbe ahụ agwaetiti dị Ebe ndị ohi, ndị ahịa na ndị gbahapụrụ site na ndị agha Cromwel, nke na-achị England mgbe ahụ. A hapụrụ England na agwaetiti ndị ahụ, tinyere Jamaica, mgbe ha bịanyechara aka na Nkwekọrịta nke Madrid na 1670. Ọ bụ ezie na n’oge ahụ ọ bụ paradaịs maka ndị ohi. Ka oge na-aga, ahịa ohu gbanwere ọnọdụ agwaetiti ndị ahụ mgbe e si n'Africa bubata ọtụtụ puku mmadụ.
Ogologo oge agwaetiti Cayman dị n'okpuru njikwa nke Jamaica, ruo 1962 mgbe Jamaica nwere onwe ya. Afọ ole na ole tupu e wuo ọdụ ụgbọ elu mba ụwa na agwaetiti, nke mere na nke ahụ na-adọta ndị njem. Mgbe ahụ, ụlọ akụ, họtel na ọdụ ụgbọ mmiri pụtara. N’oge gara aga, agwaetiti Cayman abụrụla ebe ọrụ na-akwụghị ụgwọ. E nwere akụkọ na-abụghị eziokwu nke na-akọ banyere otu ụgbọ mmiri bibiri nke ndị agwaetiti ahụ zọpụtara. Akụkọ mgbe ochie nwere na na mgbapụta ahụ ha zọpụtara otu onye okpueze bekee na ọ bụ ya mere eze ji kwe nkwa na ọ gaghị atụ ụtụ ...
Agwaetiti ndị ahụ bụ ọnụ ọnụ ugwu ugwu dị n’okpuru mmiri, Cayman Range ma ọ bụ Cayman Rise. Ha dị ihe dị ka kilomita 700 site na Miami na naanị 366 si Cuba. Agwaetiti Cayman nke Nnukwu bụ nke atọ. Ejiri coral kpuchie agwaetiti atọ ahụ site na Ice Age, foduru nke Sierra Maestra na Cuba. Ihu igwe na-adị mmiri mmiri ma na-akpọ nkụ.
A na-enwe oge udu mmiri site na Mee rue Ọktọba yana oge udu mmiri site na Nọvemba rue Eprel. Enweghị mgbanwe dị ukwuu na ọnọdụ okpomọkụ, ma e nwere ajọ ifufe ndị dị ize ndụ bụ ndị na-agafe Atlantic site na June ruo November.
Njem Nleta nke Cayman Islands
Ka anyi bido n’agwaetiti a Ukwu Cayman. Ihe mara mma Osimiri Mile asaas dị na Top 3 ebe a na-aga n'ihi na ọ na-etinye ọtụtụ ụlọ oriri na nkwari akụ. Nke a bụ otu osimiri coral n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke agwaetiti ahụ, mara mma. Ọ bụ osimiri ọha na eze nwere ike iji ụkwụ jiri ụkwụ chọọ ya na n'agbanyeghị aha ya dị ihe dị ka kilomita 10 ogologo. Ebe ọzọ ala gbara osimiri okirikiri bụ North Sound, ebe obibi nke stingrays.
George Town Ọ bụ obodo na-adọrọ mmasị nke nwere ụkpụrụ ọdịnala ọdịnala, ụlọ ahịa na-enweghị ọrụ, ụdị maka naanị ndị ọgaranya, mana ụlọ ahịa aka na ngwaahịa mpaghara. Gafe agwaetiti ahụ n’akụkụ ọwụwa anyanwụ ị nwere ike ịga leta Queen Elizabeth II Botanical Park ma ọ bụ Blue Iguanass Knowmara akụkọ mpaghara ebe ahụ bụ National Museum nke Cayman Islands, Ebe Rum na ohere mmiri mmiri ya na osisi casuarina ya, ndi Pedro St Jame Castles, ụlọ kacha ochie na agwaetiti, ma ọ bụ Obodo Bodden, agwaetiti mbụ.
Cayman Brac bụ ebe kachasị mma ma ọ bụrụ na-amasị gị ọdịdị ọ bụghịkwa ụlọ ahịa na-anaghị akwụ ụgwọ. Agwaetiti ahụ nwere ọgba nkume iji mara, enwere mmiri ị ga-eme nsị na mmiri, Ọbụlagodi n'ụgbọ mmiri ekpuchie, enwere oke ohia nke agwaetiti ahụ, ebe obibi mara mma maka nnụnnụ ndị mara mma, jupụtara n'okporo ụzọ iji nwee ọ hiụ njem ... N'ebe a ị nwere ike ịbịaru ebe ahụ site na ụgbọ elu, na ọkara otu awa, site na Grand Cayman.
Maka akụkụ ya Little Cayman bụ agwaetiti dịpụrụ adịpụ, nke dị naanị kilomita iri na isii n’ogologo na otu kilomita na ọkara n’obosara. Ọ bụ ibu jụụ ebe, na osimiri gbara agbas, nkwụ na-eme ka ifufe, mmiri doro anya ... can nwere ike ịgbazite igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ skuta iji chọpụta ya, gwuo mmiri na-ekpo ọkụ nke South Oghere Ulo olu, gaa na ndoputa Eke Booby Pond, nke nwere ọtụtụ puku nnụnụ, na-akpagharị n'etiti etiti ma ọ bụ igwu mmiri na Ọbara Park Bay Wall Park.
Lee otu 1500 mita dobe n'ihi ya, ọ bụ ndọta maka ndị dịgasị iche iche, gbakwunyere ihe ndị ahụ Ndụ mmiri fabulous na-ezo n'ime omimi ebe enweghị ụzarị ụzarị, sharks na turtles. I nwekwara ike ikwusi ijeghari bit na kayak na iru Agwaetiti Owen, ihe dị ka agwaetiti Cayman a na-amatabeghị.
Kedụ ka anyị ga - esi hazie nleta na agwaetiti Cayman? Ọfọn, ụbọchị 10 nwere ike ịbụ mmalite dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwe oge na Grand Cayman wee nwaa ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ n'àgwàetiti ọzọ. Maka njedebe nke Mmanụ aeyụ na ọnwaỌ dị mma dịka ndị na-agba ịnyịnya n'ụsọ osimiri, nri abalị onwe ha, na nnọkọ spa na nkwari akụ niile. Na-ekwu maka nkwari akụ, ị nwere ike họrọ nhọrọ niile - inlusive na ndị ọzọ nwere nri na ihe ọ drinkụ drinkụ na-aba n'anya ị na-akwụ maka iche.
Ga nleta Cayman Islands Ọ dịghị mkpa ịhazi visa. Ọ bụrụ na ị bụ ụmụ amaala Mexico, Brazil ma ọ bụ Argentina, ọ bụghị. Na enweghị ọgwụ mgbochi, maka ugbu a. Anyị ga-ahụ ma emesịa ihe ga - eme na Covid. Ọ bụ eziokwu na imirikiti njem nlegharị anya na-esite na United States mana ị nwekwara ike ibata na ụgbọ elu si Cuba na Honduras. Ozugbo ị nwere n'agwaetiti ị nwere ike iji ụgbọ njem ọha, bọs, tagzi, mgbazinye ụgbọ ala ... Kwanye n’etiti agwaetiti ee ma ọ bụ ee, ị ga-eji ụgbọelu gaa njem, Cayman Airways Express.
N'ezie, buru n'uche na ebe a ị na-anyagharị n'okporo ụzọ aka ekpe, Bekee dị mma. Kedu ego ego Cayman Islands nwere? Na Caymanian dollar, n’agbanyeghi na anabatara dollar US. Ọnụ ego ahụ bụ 1 US dollar 0.80 CI $ cents. Ọfọn, anyị nwere olile anya na ozi a ga - enyere gị aka iche echiche banyere agwaetiti Cayman dị ka ebe ezumike ga - ekwe omume.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Ebe njegharị » Njem gaa Cayman Islands